राप्रपाको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथी प्रहरीव्दारा निर्मम लाठी प्रहार, सयौँ कार्यकता घाईते ! – ebaglung.com
राप्रपाको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथी प्रहरीव्दारा निर्मम लाठी प्रहार, सयौँ कार्यकता घाईते !
२०७३ चैत्र ७, सोमबार १३:३०	Footer Slider, Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
काठमाडौ २०७३ चैत ७ । पार्टीको विधानबाट निर्वाचन आयोगले पूर्वाग्रह राखेर हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र शव्द हटाएको विरोधमा शान्तिपूर्ण जुलुस सहित आयोगको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगेको राप्रपाको जुलुसमाथी प्रहरी दमन भएको छ । निर्वाचन आयोगविरुद्ध शान्तिपूर्ण धर्नामा राप्रपा अध्यक्ष एवं उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा, पार्टी नेताहरु पशुपति शम्सेर जबरा, दीपक बोहोरा लगायत बसेका छन् ।
जुलुसले सुरक्षा घेरा तोडेको भन्दै प्रहरीले सयौँ कार्यकर्तामाथी निर्घात कुटपीट गरेको छ । सयौँ कार्यकर्ताहरु प्रहरीको प्रहारबाट रक्ताम्य बनेका छन् । यतिले मात्र नपुगेर जुलुसमाथी प्रहरीले दर्जनौँ अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । निर्वाचन आयोग अगाडि राप्रपाको प्रदर्शनमा प्रहरीको बर्बर दमनबाट पूर्व अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा घाइते भएका छन् ।
राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले आफूहरु पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार शान्तिबाटिकाबाट जुलुससहित निर्वाचन आयोगको कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्न पुगेको बताउदै प्रहरीले धरपकड गरेको बताए।
आज राप्रपाले मुलुकका पचहत्तरै जिल्ला सदरमुकामहरुमा निर्वाचन आयोगको निर्णयको बिरोधमा जुलुस भैरहेको छ । जिल्लाहरुका निर्वाचन कार्यालय अगाडी एक घण्टा धर्ना दिने काम जारी रहेको छ ।
बागलुङ जिल्लामा पनि राप्रपा जिल्ला कार्य समितिको नेतृत्वमा पार्टी कार्यकर्ताहरुको जुलुसले विविध नारावानी सहित नगरपरिक्रमा पश्चात एक घण्टा निर्वाचन कार्यालय अगाडी धर्ना बसेको जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र खड्काले बताए । उनले कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको पनि बताए ।
पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजारमा राप्रपा कार्यकर्ता धर्नामा ।
पर्वतबाट सहकर्मी प्रकाश पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार पार्टी कार्यालयबाट निस्केको जुलुसले नारावाजी सहित बजार परिक्रमा पश्चात निर्वाचन कार्यालय अगाडी एक घण्टा दिएको थियो । सो अवसरमा निर्वाचन आयोगले पार्टी विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र संवैधानि राजतन्त्र हटाएको सच्याउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
धर्ना कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष ईश्वर गिरी, रणबहादुर क्षेत्री, ठाकुरप्रसाद भुषाल, ठाकुरबम मल्ल, गंगा दर्जी लगायतले बोलेका थिए ।
चैत दशैँ मेलामा १ लाख ३३ हजार पुरस्कार राशीको भलिबल प्रतियोगिता सन्चालन गरिने !